Uvert UTM iskuduwaha juqraafi ahaan Excel - Geofumadas
Febraayo, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, Downloads, Google Earth / Maps
Mashruucii hore waxaan ku soo bandhigay warqad Excel si loo beddelo isuduwayaasha Juqraafi ilaa UTM laga soo bilaabo warqad kaas oo lagu magacaabo Gabriel Ortiz.
Aynu aragno qalabkan oo sameeya habka isku midka ah, taas oo ah, isku duwida qaabka UTM (Universal Traverso de Mercator) oo ogaanaya aagga, u beddelidda dhulalka iyo juquraafi ahaan juqraafi ahaan.
Bal aan ka bilowno nafteenna barato this: sida Google Earth, ee isku mid ah Palacio de los Deportes ee Mexico noqon lahaa X = 489513.59, Y = 2,145,667.38 ka fiirsaneysa in Google Earth isticmaalaa sida WGS84 Datum. (Waayo, in aan ku aqoon, si ay u arkaan UTM isuduwaha aad tahay qalabka oo keliya / fursadaha / vista3D / muujiyaan Laata / dheer)
Meelaha juqraafi ah, tani waxay noqon doontaa Long = -8 ° -5 '-59', lat = 19 ° 24 '18', (si loo muujiyo shabakadda Google Earth waxay noqoneysaa 'muuqaal / shabaq')
Waxaan kugula talinaynaa in aad la socoto qaabkan xaqiijinta iyo fahamka sida UTM isku duwo shaqada si aad u hesho qalabka ugu badan ee qalabka ah ee Excel.
Waan sameeyay xaashidan taasi waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido leh saaxiib kaas oo waqti hore ka hor raadinayay in loo diro Google Earth qaar ka mid ah xogta ku jirta UTM.
1. Sida loo galo xogta
Goobaha jaalaha ah waxay ka soo baxaan isuduwaha XY, iyo sidoo kale aagga, iyada oo midkani waa inuu ahaado mid taxaddar leh madaama Mexico uu tusaale u soo qaadanayo, goobaha ka baxa 16 ilaa 21 si ay iskudhacyo isku mid ah u noqdaan meelo kala duwan.
Isla arrintan ayaa ka dhacda qowlka, sida kiiska Colombia, Ecuador iyo Brazil oo leh meelo ka mid ah labada waqooyi iyo koonfurta.
Sidoo kale qaybta sare waa tiirarka tixraaca ee ay udubdhexaadinayso UTM, tani ma aha isuduwayaasha soosaarista, lakiin halkii ay ku xiran lahaayeen isku-duwayaasha.
2. Natiijooyinka soo baxa
Isku xirka cagaaran waa iskudhaf juquraafi ah, iskudhafyada bari ee Meridian ayaa noqonaya mid wanaagsan, bariiska galbeedku wuxuu noqon doonaa mid xun.
3 Sida loo soo diro Google Earth
Xitaa ka hor inta aan arkay dhawr siyaalood oo loo soo diri Excel ah fayl in Google Earth juquraafi iyo UTM, sidaas eegno, haddii aad rabto in aad soo dirto UTM isuduwaha AutoCAD, shaxankan Excel wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso.
Halkan waxaad kala soo bixi kartaa template si loogu beddelo isku-duwaha UTM Geographic.
Waxaad iibsan kartaa kaarka deynta.
Post Previous" Hore Shabakada Excel si aad ugu badasho Iskuduwaha Geographic si UTM
Post Next Waxaan rabaa inaan qoro baska sawirada, yaa qora?Next »
109 Jawaabo "Uvert iskuduwaha UTM iskuduwaha juqraafi ee Excel"
Wuu soconayaa ansax
Jose Solorzano Pinto isagu wuxuu leeyahay:
Dhammaan fikradaha hore waxay la socdaan taariikho hore, maanta oo Sabti ah sanadka 2020, sida noocyadan oo kale ah, tikniyoolajiyadda xilligaas way ka duwan tahay ta maanta, ma sii socon doontaa, ma kala duwanaansho baa jira?
Waxaan ugu dirnay emaylkaaga. Hubaashii wuxuu galay faylka spam qaar.
Javier Galofre isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan kaliya soo iibsaday qaabka, lakiin wax iima imaanin. Fadlan ma hubin kartaa dirista tani?
Tisti isagu wuxuu leeyahay:
Xilliga la joogo, waxaan kaliya soo helay websaydhkan oo waan la dhacay. Weli waa inaan ka maqnaadaa in yar, laakiin waxay u egtahay wax weyn.
Sidoo kale ma helo meel aan ka soo dejiyo… Aaway miiskii cajiibka ahaa?
LUIS LARA isagu wuxuu leeyahay:
Ma arko meesha aan hoos u dego !!
ma na siin kartaa tusaale?
Frank isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado sababta oo ah markii aan galay shabakad isku mid ah waxaan u codeynayaa natiijooyin kala duwan tusaale ahaan
Efrain Peña Borda isagu wuxuu leeyahay:
q barnaamij loogu talagalay windows vista ama bogga sare Waxaan isticmaali karaa oo aan lacag la'aan u bedeli karaa si isku duubnaanta iskudhafka ah ee juqraafi ah ama goobjoogayaal, Waxaan kuugu mahad celinayaa dareenka hadda.
Jonathan Cardiel isagu wuxuu leeyahay:
Sure, wax ka badan intaas.
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii miiskaaga aan ku bedeli karo (laga bilaabo UTM ilaa jogada) isla markaana isku duwo badan. Qaar badan ayaa la mid ah 1000.
Waxaan sugayaa jawaabtaada saxda ah, mahadsanid.
Ma hayno template si loogu badalo GTM ilaa UTM.
Pedro luis patino isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan shakhsi ahaan xiiseynayaa qaabka loo yaqaan 'extern template' si loogu badalo isku-duwaha GTM 'UTM iyo Foomamka
Fadlan i soo dir lambarka xisaabta xisaabta xisaabta
Hello, Waxaan haystaa warqad sare si aan uga gudbo min toban ilaa heer, darajo, daqiiqo, ilbiriqsi.
Kala xiriir aniga
Waad ku mahadsan tahay, waan arki doonaa waxa ugu habboon ee lagu bixin karo habka bixinta.
Dhibaato la'aan, qaab-dhismeedka wuxuu ka kooban yahay tiirar halka ay ka taageerto fikradda qaabka jajab tobanle.
Markaad iibsato, nala soo xiriir annaga waxaan kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo.
Gacaliye, waxa aan doonayaa waa in aan awood u yeesho in aan garaafto isku-duwaha MicroStation V8i, laakiin MyHHeld waxay ku qaadaa aniga darajooyin jajab ah LAT W89.14298 N13.71391, waana inaan u beddelaa XY, moodellada ugu sarreeya waxay weydiisanayaan iyaga oo ah Darajooyin, Daqiiqado iyo Sekooyin.
ayaa iga caawin kara arintan. Waad ku mahadsan tahay
Marka hore, waxaan kuugu mahadnaqayaa danahaaga.
Hubi waxa aad raadineysid, maaddaama qaab-dhismeedkani ka yimid UTM ilaa juqraafi laakiin waxaa jira shey kale oo hubiya inaad samayso waxa aad rabto.
Fiiri fiiladaan faylasha kale ee la heli karo.
SU'AASHA AAD KA HELI KARTAA SHAQADA CODSIGA KA HELI KARTAA SHAQOOYINKA LAGA HELI KARTAA WAXA LA QAADAY.
Maya. Qodobka qodobkan wuxuu kaliya ugaga rogi karaa UTM-ga joqoraafi ahaan.
Laakiin mid ka mid ah maqaalkan kale haddii aad samayn karto waxa aad rabto
VICENTE DU isagu wuxuu leeyahay:
Waxaad isticmaali kartaa qoraalka si aad u bedesho isuduwaha juqraafiga
Isku-duwaha UTM iyo
Gustavo Hernandez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku talinayaa boggayaga, waxaa jira hufan .exe oo ku salaysan habka Gabriel Ortiz, ma aha qasab laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan faallo ka bixiyo, waxaan rajeynayaa inaad u adeegto, salaan.
Douglas isagu wuxuu leeyahay:
Sideen ugu beddelaa isku-duwaha UTM ee isku-duwidda juqraafiyeed?
Maadaama uu template u shaqeeyo iyada oo aan wax khasaare ah
Haddii aad naga tagto tusaale, waan dib u eegi karnaa.
Maxuu yahay iskuduwayaasha aad soo gashey, maxuu yahay, maxuu yahay maxsuullada aad soo saareyso, wadanka aad ku sugantahay waxaanan hubin doonaa inaan aragno waxa dhaca Ha noqonin wax kala saarid ah kumanaanka kumbuyuur ama tobanlayaal.
Fresia isagu wuxuu leeyahay:
Hada, Waxaan soo iibsaday foomka, waxaan isku duubay si aan u badalo laakiin waxaan u diray qaaradda. Waxay noqon kartaa in ay ku taal aagga, xaashidaan waxay dhigaysaa 15, ee loogu talagalay Chile xaggee bay tahay inaan dhigo?
Hello Shaviola, halkan waxaan ku abuurnay qaab-dhismeedka aad xiiseyneyso
Tilmaamo malahan Geofumadas oo la mid ah tii aad degtay. Mid baa jira laakiin waxa uu sameeyaa waa kan kale, oo u beddelaa digrii illaa jajab tobanle
Shawiola isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan u baahanahay inaan isku-baddalo isku-duwayaasha toban derejo si aan isku duwo heerarka, daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada.
Xaqiiqdii isku-duwahaaga Waana xun yahay, sababtoo ah latitude wuxuu ka bilowdaa Ecuador markii uu gaaro El Salvador waa tiro ka badan hal milyan. Hubi sababta oo ah sida muuqata dhibaatada ayaa jirta.
Waa taas in waddankan kala duwanaantii xagga dhererka ee digrii ay ku kala duwan yihiin inta u dhaxaysa 87 ° iyo 89 ° iyo farcanka u dhexeeya 13 ° iyo 14 ° waa waddan Bartamaha Ameerika
X = 439188.2040 iyo Y = 316859.3910
Haa laakiin ma ogaan karno waxaan oran lahayn. Sideed ku ogaatay inay taasi bixin karto?
Datumkee ayaad isticmaashay?
Diiwaangalinta iskudhafyada halkan maado, waxaanan isku dayi doonaa gawaarideena si aan u aragno haddii aadan daryeelin.
fiiri, adeegso iskuduwaha isuduwaha mitirka illaa darajooyinka iyo natiijooyinka ay tahay inaan bixiyo waa 89 ° longitude iyo 13 ° latitude, laakiin waxay i siisay 89 ° iyo 2 ° latitude isticmaal aagga 16 iyo waqooyiga galbeed hemisphere waxaan u baahanahay inaan ogaado waxa ay sameyneyso
waxaa jira nooc wadne google ah oo aqbala inuu galo qodobbada leh isku-duwayaasha UTM waa 6.2.1.6014 (beta)
Waxaad gujisaa xiriirka leh:
Halkan ayaad soo dejisan kartaa
Ama batoonka oranaya "soo iibso hadda"
Luis Gallardo isagu wuxuu leeyahay:
Anigu ma heli karo habka loo soo diro Dollarka 2 waxaanan si deg deg ah uga baahanahay in aan soo dejiyo waraaqda wareejinta isuduwaha.
Sure, ka bax mesh. Waxaa laga heli karaa halkaas.
Waayahay oo ma jiraan suurtagal in la helo khariidadda Venezuela oo aniga iiga sheegeysa meesha ay ku taallo saraha ama aagagga ay ku yaalliin?
GELIN WGS84 waxay u dhigantaa UTM WGS84
Hada, waxaan qabaa shaki iwm. Isku-duwaha UTM waa isla GUDBI? waa in aan u baahanahay inaan ogaado meelaha ay Venezuela u kala qaybsan tahay, ma iga caawin kartaa fadlan?
Xaaladaha qaarkood waxay dhici kartaa in soo dejinta la joojiyo, ama in Proxi ka aad ku xiriirayso xannibaadda soo dejinta. Si kastaba ha noqotee, haddii taasi dhacdo, waxaad ku ogeysiin kartaa boostada.
Waxaan kuugu soo dirnay fariin email ah.
heeeey wuxuu bixiyaa dollarka 2 oo ha ii ogolaanin inaan soo dejisto qaabka wanaagsan
Maxaan sameeyaa ?????
Ku shaqee aag kasta
cyc isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ula jeedaa aagga '14' ama wuxuu la shaqeeyaa aagagga oo dhan
Waa maxay 14 macnaheedu?
miyay hababkani u shaqeeyaan 14?
Waan kugu mahadnaqayaa macluumaadka
Lama awoodi karo, Google Earth ma aqbasho soojeedinta isuduwidda ee qaabka UTM. Waxa ugu macquulsan waa inaad ku sameyso barnaamij GIS sida Microstation, gvSIG ama QGis, ka dibna aad u dhoofiso kml si aad uga aragto Google Earth.
Hada, fiiri, waxaan xiiseynayaa isku-duwaha.Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida aan isku-darsadeyga ugu soo celiyo Google Earth horay, Gracesco, caawimaad.
Hi Miguel. Marka laga hadlayo su'aashaada:
-Xidhiidhinta ay muujiso Google Earth iyo kuwa aad u tixraacdo waa kuwa loo yaqaan UTM. Nidaamkani wuxuu u qaybiyaa qaaradaha aagagga 60 ee u dhexeeya cirifka ilaa garabka, 6 darajo midba midka kale. Jihada Bari, soonaha kasta wuxuu leeyahay 500,000 sida meridian udub dhexaadka ah sidaas darteedna wuu kordhayaa ama yareeyaa ilaa uu gaaro xadka aagga, markaa isku duwaha bariga waa lagu celceliyaa aag kasta, laakiin waligeed ma aha mid taban. Dareenka waqooyiga, wuxuu ka bilaabmaa eber laga bilaabo barbaraha, dhanka waqooyiga cirifka iyo xagga koonfureed ee hemisphere wuxuu ka bilaabmaa cirifka ilaa uu ka gaaro barbaraha.
Nidaamkani wuxuu sababayaa dhibaatooyin ka jira waddammo ku lug leh in kabadan hal aag, marka loo eego Colombia waxaa u dhexeeya aagagga 17, 18 iyo 19. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay awood u yeelashada qayb ka mid ah hemisphere waqooyiga iyo mid kale xagga hemisphere koonfurta.
Sidaa daraadeed dalalka ayaa go'aaminaya inay doortaan asalka been abuurka ah, si loo yareeyo murugada arinkan, taasina waa sababta aysan u suurta galeynin isku-duwayaasha in ay la jaan-qaadaan kuwa muujiyay Google Earth.
Si aad u sameysid natiijooyinka, Machadyada Joqraafiga waxay bixiyaan macluumaad sida sidan:
Waxaad kaloo fiirin kartaa xiriiriyahan:
Markaad galeyso bogga, sababtoo ah waxaan raadinayay xogta isuduwaha ee aan faahfaahin hoos ku qoran:
Khariidadda Colombia ee ay diyaarisay IGAC (Agentin Codazzi Instituto Geografico), iskudubarida khariidada ku xusan waxay kudhaceysaa iskudhafka khariiradda Google Earth:
Tusaale ahaan, wadataa map of Colombia ee, si ay u helaan booska saxda ah si ay koonfurta Puerto Wilches 1021223E, 1302614N ma wadataa Kuwani awoodaan in ay helaan map-ka ee Google Earth, sharixi kartaa farqiga this?
Intaa waxaa dheer, sida kiis cajiib ah, oo laga soo qaadayo khariidadda Google Earth, si gaar ah qaybta Nariño waxaa la arkay in isku-duwayaasha ka taga Galbeedka illaa Bariga, aan soo qaadanno kiiska Tumaco, oo ku yaal 748650 E, haddii aan sii wadno isku-duwayaasha isku midka ah dhanka bariga, waxay layaab ku tahay in markay gaadho 833969E oo ay waxyar ka dib isu beddesho 166030E. Waxay sidoo kale dhacdaa in dhulka loo yaqaan 'Earth Earth' laga bilaabo barbaraha illaa Waqooyiga uu ka bilowdo 0.0, si kastaba ha noqotee, IGAC waxay leedahay isku-dubbarid u gaar ah aaladda dhulka.
Gunaanad ahaan, sidee looga beddeli karaa isku-duwaha hay'adda 'IGAC' ee loo yaqaan Google Earth?
Waad ku mahadsantahay horay uqaadatay kaalmadaada qiimaha leh ee sharaxaysa xaaladdan jahwareerka leh.
qabsashada Aad u fiican oo shaqo ah ee Gabriel Ortis, aan u isticmaalo in Win XP laakiin waxaan u baddashaan W7 iyo waxaan sii wadi karto si ay u isticmaalaan, waxaa aad waxtar leh si dhibcood ku qaataan si ay fayl KML akhriyaa dhulka google ah, haddii aad i siin email ah waxaan u soo diri qabsashada.
Sure, ka tag oo kaliya tirooyinka seconds.
Haddii aanan haysan tirooyinka waxaan kale oo aan u bedeli karaa si ay u fuliyaan?
Oscar alvarado isagu wuxuu leeyahay:
qalab weyn oo isku mid ah si loola macaamilo isku beddelidda jimicsiyada UTM
ARNALDO SALAZAR isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku tijaabiyey iyada oo la adeegsanayo dhibco isku-duuban oo ah Cartography-ga Qaranka ee Venezuela isla markaana waxay ku siineysaa isla natiijada. mahadsanid
Waad ku mahadsan tahay waxtarkaaga.
Vitos, si aad u sameyso is-beddelka dib-u-noqosho, ama laga bilaabo Geographical ilaa UTM waxaad ku hubin kartaa xiriirkaas Geofumadas
vitos isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan u beddelo xogtan W 14 ° 51 ′ 16.59 »YS 90 ° 51 ′ 50.1» una beddelo UTM
Kaalintaas weyn, waxay ku shaqaysaa dhammaanba kiisaska oo dhan, laakiin waxay ku xirantahay xaddidaadaha habka. Waad ku mahadsantahay inaad ku wadaagto webka.
Andy isagu wuxuu leeyahay:
waad ku mahadsantihiin inaad la wadaagto jadwalkan dadka.
waxay ka mid yihiin faa'iido weyn
Magin64 isagu wuxuu leeyahay:
1 Giga Waad ku mahadsan tahay ka qayb qaateen in blog this, ka badan aad u fiican, clickcidades (Been hambalyo informatic !!) download isbiriidhshiit Excel ah juqraafi in UTM, laakiin link halkan kari waayay, ie UTM juqraafi, qaar ka mid ah la siiyo dardaaran gaar ah?. Waad ku mahadsan tahay.
ramirez guulaha isagu wuxuu leeyahay:
Waa qalab aad u fiican ...
Waxaa jira dad mararka qaar aad u liita oo aan jeclayn inay la wadaagaan aqoontooda laakiin waxaan arkaa inaad deeqsi tahay ... waad ku mahadsan tahay qalabkaaga ...
Sida laga soo xigtay xiriir this:
Google Earth wuxuu adeegsadaa saadaalinta fududeynta iyo Datum WGS84
Argentina waxaa ku jira aagagga 18,19.20,21,22 sida laga soo xigtay xidhiidhkan
Mercedes isagu wuxuu leeyahay:
Sidaa darteed, waa in aan ka dhigno muuqaal of Bs ah. Sida, Argentina leh dhibcood laga soo gooyay google, ma cidna ma ogtahay waxa ka mid ah spheroid iyo rukunka in Google Earth isticmaalaan iyo meesha ay Argentina waa? Si aad u sameysid joornaalka, Erdas wuxuu i weydiinayaa xogtaas.
Dabcan gudaha xiriirka Gabriel Ortiz waxaad arki kartaa qaababka.
Hambalyo! Kaalmo aad u fiican Si kastaba ha ahaatee, ma i siin kartaa qaacidada si aad u sameyso xisaabiyaha?
Mahadsanid! iyo salaan ka timid Spain!
Benancio isagu wuxuu leeyahay:
isku duwayaasha joqraafiga joornaalada
Waad ku mahadsantahay fikrad fiican
Waxaan u maleynayaa in aad UTM, nuqul ka wadataa ee miiska Excel ah, oo muujinaya meesha jira oo noqday juquraafi ah sida well'll iyaga leeyihiin aagga kale, haddaba haddii ay dhacdo in UTM aagga kale, kaxee wadataa juquraafi iyo sabiib diinta UTM, doorashada zone kale.
Hada, Waxaan haystaa xog ah oo la igu soo qaaday ee 16 laakiin waxaan ubaahanahay inaan u bedelo aagga 15 sida aan u sameeyo
Inta u dhaxaysa isku-duwidda juquraafi iyo UTM ma jirto khalad, waa isku mid.
Haddii aad rabto in aad fahamto aragtidaada si aad u noqoto isbadel, Gabriel Ortiz wuxuu sharxayaa qodobkan.
ramdwing isagu wuxuu leeyahay:
aad u wanaagsan aad farsamo, laakiin waxaan u baahan tahay in aad ogaato sida ay isbeddel in la sameeyo, laakiin ma digital lay Engineering ay qoreyso wax soo saarka xoolaha ardayga waxbarashada ilaalinta ee carrada iyo biyaha, xaalkan aan weydiisan si ay u muujiyaan xisaabinta iyo go'aamiyo qaladka u dhexeeya labadan wadataa, ma sida inaad u samaysaa. Waxaan iga caawin kara? ugu muhiimsan waa in la xisaabiyo qalad u dhexeeya labada wadataa !!
Waa inaad ku aragtaa aagga udhaxeeya Google Earth, sababtoo ah Colombia 17,18 iyo 19 ayaa ku habboon
Hambalyo! Waxaan ku soo galay xogta xog ururinta juqraafiga si aan u dhaafo fariisto laakiin natiijada aan helayo ma ahan waxa aan filayay. Waxaan u baahanahay isbeddelkan isuduwidda ee Colombia. Isbedelkee ayaan samaynayaa?
Lambros isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Iyadoo Plex.Mark! Waxaad ka shaqayn kartaa nidaamka isku-duwidda ee Google Earth:
hello! Qof ayaa ogyahay sida aan uga bixi karo UTM ilaa Geograficas (darajo) laakiin tobanlaha, ma aha daqiiqado ama ilbiriqsi.
Ma jiraa qalab aad u wanaagsan oo iigu ogolaanaya inaan sidan sameeyo?
mahadsanid wakhtigaaga, iyo mar kale geofumadas weyn ..!
Geofumadas weyn iyo Gabriel Ortiz, oo aad u mahadsantahay danahaaga inaad ka caawiso dadka kale! From Peru waxaan ku salaamayaa ..!
GERARDO C isagu wuxuu leeyahay:
SHAQO WANAAGSAN IYO WAX SANO QAARKOOD EE QABA macluumaadkaaga iyo aad buu u wanaagsan run wanaagsan, waxaan dhibaato ka qabto isbeddelka UTM isuduwaha ama juqraafi diyaarad, IN loo baahan yahay in Shirqoolkii duurka WITH ACTION LIVE ama diyaarad KU SALEYSAN SALDHIGA POINTS MACLUUMAADKA duurka IYO JIDH AHAANEED UTM isuduwaha ama KOORSADA IYO juquraafi dHOW in ay xaqiijiyaan wadataa UTM CUSUB LADAAD, OJALA i caawin kartaa
Mundane isagu wuxuu leeyahay:
Qofkastoo laga yaabo inuu daneynayo inaan ka tago cinwaanka bogga kuu ogolaanaya inaad hesho jaangoynta juqraafiyeed iyo UTM meel kasta:
UTM Flayer ayaa dhacay, barnaamijyada Zonums badankood waxaa loo qaabeeyey habkaas.
Waad sameyn kartaa sheekooyinka Mawduuca Excel
Saaxiibka Oliver, NOD 32 bilaash ma'ahan in ka badan maalmaha 30. Haddii aad raadineyso bogga si aad ugu iibsato:
Haddii aad rabto antivirus lacag la'aan ah oo aan dhicin, isku day Avira
J. Oliver García Rizo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaad iigu samayn kartaa raalli gelinta ah ee igu heleysa antivirus ESET NOD 32, waan kugu mahadnaqayaa.
Waxaa jira barnaamijka UTM Flyer, si ay u sameeyaan isbarbardhigga Google ee ay i siiyeen, laakiin mar hore ayaa dhacay, waad i caawin kartaa oo aad i siisaa, si aysan u dhicin.
Nicaragua waxaad ka shaqeysaa Zone 16 iyo 17, qof ayaa i caawin kara.
Waxaan u baahanahay inaan helo barnaamijka UTM Flyer si uu udhaqaaqo UTM isku duwo NAD 27 Central ilaa Geografica ee Khariidadaha Google
Waxaan u malaynayaa in taasi micnaheedu tahay: Soonaha '18', x = 338552 y = 9065052 koonfurta hemisphere. Iskuday shaashadda. Waad ku dhex gali doontaa datum
mauro jimenez nartel isagu wuxuu leeyahay:
FADLAN SI AY I CAAWIN KARTAA SI AAN U QAADO MACLUUMAADKA UTM EE MACLUUMAADKA FARSAMADA DIIWAAN GALINTA AY SAMEEYAAN:
Waad ku mahadsantihiin inaad iga caawisay inaan shaqadayda qabto.
dhererka galbeedka 18L0338552
Koonfurta Göteborg UTM 9065052
Waxaan helay a email ka Mario Sanchez inoo sheegayaa inay dedejiyaan shaqadooda (barataa dhaqanka daaqa ido by murriyado GPS-GPRS) yiri taxane ah oo miisaska si ay u tagaan ka degrees tobanle si toos ah sexagesimal iyo this natiijada waxaa si toos ah la geliyo egeomates template ku cad in this post.
Intaas waxaa dheer in ay ku darey qaabab kale si loo xisaabiyo masaafada u dhaxeysa laba iskudhafeed iyo haddii ay diyaar u tahay wakhtiga qaadashada iskudhafka sidoo kale xawaaraha barakaca la helo.
Wuxuu u maleynayay in laga yaabo inay faa'iido u leedahay qof inuu sidaas u diro, halkaasna waxay haystaan ​​faylka ay ku hayaan goobaha.
Lorenia isagu wuxuu leeyahay:
Qalab fiican, hambalyo
Calaamadee magaca magacaabida xisaabiyaha Gabriel Ortiz
Noocyada saxda ah ee muujinta:
434156.35 4804758.33 102.44 (meel kasta oo xariiq ah, koowaad X kadibna Y. Z waa ikhtiyaari.)
Isticmaal boos bannaan ama tab ah si aad u kala soocdo X koollooyinka Y iyo Y, iyo kiiskaaga Z.
Haddii aad ujirto miyirka, taasi way ku dhibeysaa.
JAVIER CRUZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay inaan u bedelo X, Y isku-duwaha isku-duwaha UTM
Waxaan galay xogta 'CARORDOGRAPHIC COORD CONVERSOR' ee Gabriel Ortiz ». laakiin ma tuurayo xogta aan isbarbar dhigayo.
Xogta waa sida soo socota: X = 622,552.17 / Y = 2,062,181.26
Xogta la celinayo waa: N 64 ° 24 ′ 46.02 ″ E
laakiin taasi ma imaanayso markaad soo gasho.
HUSO in aan kuu soo bandhigo waa: 15 oo u dhiganta Campeche, Mex.
Maxaan khalad sameynayaa?
Waad ku mahadsantihiin caawimaad horey loo sii wado
beddel wanaagsan iyo qaabka ugu fiican ee waxbaridda waxaa jira laakiin u mahad naqid shaqadan weyn. waad ku mahadsan tahay wax badan
luis lelipe isagu wuxuu leeyahay:
tani waxay ka dhigeysaa habka wax loo barayo. fadlan u soo dir emailkan. waad ku mahadsan tahay wax badan
Taasi waa ku fiican tahay tababare aniga oo kale ah. Ud. Ma jeclaan lahayd inaad iigu soo dirto emailkan? mahadnaqyo badan iyo rajo wanaagsan oo leh tacliinta caqliga leh.
Anahí, boostadan waxay tusinaysaa tusaalaha aad codsatay, laga bilaabo labada dhinac ee koonfurta iyo Bolivia
Adriana isagu wuxuu leeyahay:
Haddii aad ku dhejiso Muuqaalka / View / Grid Zone wuxuu u muuqanayaa, ilaa iyo inta aad kicisay UTM ee Qalabka / Xulashooyinka / 3d View.
Anahi isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay shaqo fiican, waxay ka caawisaa wax badan, su'aal ku saabsan Bolivia oo muujinaysa isbeddelka isdhexgalka UTM ee gobollada 19, 20 iyo 21.
Waxaan rabaa inaad iga caawiso inaan helno garaafka si aan u muujiyo ardayda iskudhafyada aag kasta.
Carlos Flores isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo, runtii waa qalab fiican iyo shaqo wanaagsan.
badhka isagu wuxuu leeyahay:
Marka hore waxaan kuugu hambalyeynayaa shaqooyinka kala duwan ee aad ka gasho kaalinta labaad ee baaxadda bixinta aqoontaada 'dadka kale ee, sida aniga oo kale, aan haysan macluumaad badan, in ka badan sababo kugu filan oo aad horay ugu socoto nasiib